Izibalo eziyi-14 zokucacisa ukumaketha kokuqukethwe | Martech Zone
Izibalo eziyi-14 zokucacisa ukumaketha kokuqukethwe
NgoMgqibelo, Septhemba 28, 2013 NgeSonto, Septhemba 29, 2013 Douglas Karr
Sivame ukusebenza nabantu abanenkinga yokuqonda izinzuzo zokumaketha kokuqukethwe. Kungenzeka bakhangise kwimidiya yendabuko noma bashayela ukuthengisa ngeqembu elimnandi eliphumayo. Ngenkathi singaphikisani nalutho nganoma iyiphi indlela, utshalomali luhluke kakhulu. Ngokukhangisa, izithameli zingezomunye umuntu futhi ukhokha imali ekhokhelwa ukufinyelela lezo zilaleli. Awulona igunya noma umthombo othembekile, yibo. Futhi ngokuthengisa okuphumayo, izindleko zakho zilingana nomthamo wokuthengisa ongathanda. Ukuthengisa okuningi kudinga abantu abaningi (noma abantu ababiza kakhulu).
Ukumaketha kokuqukethwe kufana kakhulu nanoma yikuphi ukutshalwa kwezimali ongakwenza. Ucezu ngalunye lokuqukethwe noma ukuxhumana isitoko esithengelwe ikusasa lakho. Njengoba ukhulisa ukumaketha kwakho kokuqukethwe, utshalomali luyakhula. Inyanga ngayinye, unokuqukethwe okuningi nokuningi okusebenzela wena ukwakha ukwethembana, igunya kanye nezithameli zakho noma umphakathi. Ngemuva kwesikhashana, umphakathi ngokwawo uqala ukusebenza ngokuthanda kwakho ushayela ukuthengisa okuningi.
Ukuthethelela utshalomali lwesikhathi eside kudinga izibalo ezithile eziqinile, noma kunjalo, futhi iSmart Insights ikwenzile lokho. Landa ifayela labo le- umhlahlandlela nethempulethi yokwenza icala lebhizinisi lokutshala imali kwezentengiso ezidijithali ngendlela ethe xaxa - nokuthi ungazinqoba kanjani izingxabano ezingokomzwelo, futhi. Nazi izibalo ezisekelayo abazihlanganisile:
Tags: Ukukhangisa Okuqukethweutshalomali lokuqukethwe kokuqukethweukulungiswa kokumaketha okuqukethweizizathu zokumaketha okuqukethwe
I-IBM Smarter Commerce: Ipulatifomu ye-Advanced Social Analytics